Mabasa Evaapostora 20:1-38
20 Mheremhere payakanga yapera, Pauro akatumira shoko kuti vadzidzi vauye, uye akavakurudzira ndokuvaoneka, akabva apinda munzira akananga kuMakedhoniya. 2 Akapfuura nemunharaunda dzemo achitaurira vaivamo mashoko akawanda ekukurudzira, ndokuzosvika kuGirisi. 3 Akaita mwedzi mitatu ari imomo, asi sezvo vaJudha+ vakanga vamurongera zvakaipa paakanga ava kuda kukwira chikepe kuti aende kuSiriya, akachinja pfungwa akabva adzokera nekuMakedhoniya. 4 Varume vaifamba naye ndiSopata mwanakomana waPairasi wekuBheriya, Aristako+ naSekundo vekuTesaronika, naGayo wekuDhebhe, naTimoti,+ nevamwe vaibva kunharaunda yeEzhiya, Tikiko+ naTrofimo.+ 5 Varume ava vakafanotungamira, vakanotimirira kuTroasi; 6 asi isu takapinda muchikepe tikabva kuFiripi pashure pemazuva eChingwa Chisina Mbiriso,+ uye takasvika kuTroasi kwavaiva, taita mazuva mashanu tichifamba, ndokuzogarako kwemazuva manomwe. 7 Pazuva rekutanga revhiki, patakanga takaungana kuti tidye, Pauro akatanga kutaura vakateerera, sezvo aizoenda mangwana acho; akaramba achitaura kusvikira pakati peusiku. 8 Saka muimba yepamusoro matakanga takaungana maiva nemarambi akawanda. 9 Mumwe mukomana ainzi Yutiko akanga akagara pahwindo, akabatwa nehope Pauro achingotaura, uye akundwa nehope, akawira pasi achibva panhurikidzwa yechitatu, akanhongwa afa. 10 Asi Pauro akadzika pasi, akazviwisira pamusoro pake, akamumbundira,+ akati: “Regai kuita mheremhere nekuti ava mupenyu.”*+ 11 Akabva akwira muimba yepamusoro, akaita kuti vanhu vatange kudya,* iye akadyawo. Akaenderera mberi achitaura navo kusvikira kwaedza, achibva azoenda. 12 Saka vakaenda nemukomana wacho ari mupenyu, vakanyaradzwa kwazvo. 13 Isu takafanotungamira kuAsosi nengarava, kwataida kuti Pauro azokwirira, nekuti akanga atiudza kuti tidaro iye achienda ikoko netsoka. 14 Saka paakazosangana nesu kuAsosi, takamukwidza, tikaenda kuMitirene. 15 Uye takasimuka mangwana acho, tikasvika pedyo neKiyosi, asi zuva rakazotevera takasvika kuSamosi, uye mangwana acho takazosvika kuMireto. 16 Pauro akanga asarudza kusapfuura nemuEfeso+ kuti arege kunyanya kugara munharaunda yeEzhiya nekuti aida kukurumidza kusvika kuJerusarema+ pazuva reMutambo wePendekosti kana zvaibvira. 17 Asi ari muMireto, akatumira shoko kuEfeso, akashevedza vakuru veungano. 18 Pavakanga vasvika kwaari, akati kwavari: “Munonyatsoziva kuti ndakazvibata sei pakati penyu kubvira pazuva rekutanga randakapinda munharaunda yeEzhiya,+ 19 ndichishandira Ishe semuranda nekuzvininipisa,*+ nemisodzi yaikonzerwa nemiedzo yaibva kuvaJudha vaindirongera zvakaipa, 20 asi ndisingaregi kukuudzai zvinhu zvaikubatsirai* kana kukudzidzisai paruzhinji+ nepaimba neimba.+ 21 Asi ndakapa uchapupu hwakasimba kuvaJudha nevaGiriki nezvekupfidza zvivi+ pamberi paMwari uye kutenda munaShe wedu Jesu.+ 22 Iye zvino ndiri kuenda kuJerusarema ndichitungamirirwa nemweya kuti ndidaro,* kunyange zvazvo ndisingazivi zvichaitika kwandiri ikoko, 23 kunze kwezvandiri kuramba ndichipupurirwa nemweya mutsvene muguta neguta, uchiti jeri nematambudziko zvakandimirira.+ 24 Kunyange zvakadaro, handioni upenyu hwangu* sehunokosha kwandiri kana ndisina kupedza nhangemutange yangu+ neushumiri hwandakapiwa naShe Jesu, kuti ndipe uchapupu hwakasimba hwemashoko akanaka enyasha dzaMwari. 25 “Iye zvino ndinoziva kuti pakati penyu imi vandakaparidzira Umambo hapana kana mumwe chete achaona chiso changu zvakare. 26 Saka nhasi uno kana paine anoramba kuti ini ndakachena paropa revanhu vese ngaapupure,+ 27 nekuti handina kumborega kukuudzai zvinhu zvese nezvechinangwa chaMwari.+ 28 Zvichengetedzei imi,+ pamwe neboka rese remakwai ramakagadzwa pakati paro nemweya mutsvene kuti muve vatariri varo,+ kuti mufudze ungano yaMwari,+ yaakatenga neropa reMwanakomana wake.+ 29 Ndinoziva kuti kana ndaenda mhumhi dzinotyisa dzichapinda pakati penyu+ uye hadzizobati makwai neunyoro, 30 uye pakati penyu pachamuka varume vachataura zvinhu zvisina kururama kuti vatsause vadzidzi vavatevere.+ 31 “Saka rambai makamuka, muchiyeuka kuti kwemakore matatu,+ siku nesikati, handina kurega kurayira mumwe nemumwe wenyu nemisodzi. 32 Uye iye zvino ndinokuisai mumaoko aMwari nekushoko renyasha dzake, iro rinogona kukuvakai nekukupai nhaka pakati pevakatsveneswa vese.+ 33 Handina kuchiva sirivha, kana goridhe, kana chipfeko chemunhu.+ 34 Imi pachenyu munozviziva kuti maoko aya akashandira zvinhu zvandaida+ nezvevaya vandaiva navo. 35 Ndakakuratidzai muzvinhu zvese kuti kana muchishanda nesimba saizvozvo,+ munofanira kubatsira vaya vasina simba uye kuyeuka mashoko aShe Jesu, paakati: ‘Kupa kune mufaro+ kupfuura kugamuchira.’” 36 Uye paakapedza kutaura mashoko aya akapfugama navo vese, akanyengetera. 37 Vese vakatanga kuchema chaizvo vachimbundira Pauro* nekumutsvoda, 38 nekuti vakanyanya kurwadziwa neshoko raakanga ataura rekuti vakanga vasingazoonizve chiso chake.+ Vakabva vamuperekedza kungarava.
^ Kana kuti “mweya wake uri maari.”
^ ChiGir., “akamedura chingwa.”
^ Kana kuti “nepfungwa dzinozvininipisa.”
^ Kana kuti “zvakakunakirai.”
^ Kana kuti “ndichimanikidzwa nemweya.”
^ ChiGir., “vachiwira pamutsipa waPauro.”